I-Xiaomi Mi 9 Edition Edition yeyona fowuni inamandla emhlabeni | I-Androidsis
UXiaomi uza kuvula ifowuni ephambili Xiaomi Mi 9 el 20 ngoFebruwari. Kunyaka ophelileyo, inkampani yabhengeza I-smartphone Mi 8 yoHlelo lokuHlola kunye Xiaomi Mi 8. Ke ngoko, amanye amarhe athi ifowuni Ushicilelo lweMi 9 Explorer uya kuqala ecaleni kwakhe Siyi9.
Inguqulelo evuzayo yoHlelo lweMi 9 Explorer eneekhamera ezine ezijonge ngasemva ngoku zijikeleza iWeibo. Nangona kunjalo, akubangakho siqinisekiso saseburhulumenteni sobukho bayo kwinkampani. Namhlanje, umsunguli we-Xiaomi u-Wang Chuan uyingqinile loo nto Ushicilelo lweMi 9 Explorer yeyona smartphone inamandla ehlabathini.
UChuan ubanga ukuba ebesebenzisa iXiaomi Mi 9 Edition Edition kangangexesha elithile ngoku kwaye kunjalo eyona fowuni inamandla emhlabeni. Uye watsho ukuba ifowuni iyakuxhotyiswa ngekhamera eyongezelelweyo. Ukongeza, isixhobo sinemimangaliso ethile kubalandeli bayo, ngokwento ayibonisileyo.
UXiaomi Co-Umsunguli uthi iXiaomi Mi 9 Edition yoHlolisiso yeyona Fowuni inamandla kwihlabathi
Uhlelo lonyaka ophelileyo lweMi 8 Explorer lubonise umva obonakalayo. Kukho ithuba lokuba umntu oza kungena ezihlangwini zakhe aze nezixhobo ezifanayo. Kuba eyandulela ifowuni yanconywa ngenkangeleko yayo, Ushicilelo lweMi 9 Explorer lunokuza noyilo olukhulu.
Akukho lwazi lufumanekayo kwinkcazo yoHlelo lweMi 9 Explorer. NjengoMi 9, inokuba iqhutywa yi I-SoC Snapdragon 855. IXiaomi Mi 8 yaziswa nge-6GB ye-RAM, ngelixa iMi 8 Explorer Edition ifike nge-8GB ye-RAM. Umenzi waseTshayina unokunika ii-specs eziphezulu ku-Mi 9 Edition Edition kunefowuni ye-Mi 9, njengoko kulindelwe kakuhle. Ngokwayo, inokufika ngememori ye-RAM eyi-10 GB, kanye njenge Black Shark Helo kunye Mi 3 Mix, ezinye iifowuni ezimbini zikwikhathalogu yenkampani yaseTshayina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Xiaomi Mi 9 Edition Edition yeyona fowuni inamandla emhlabeni